2018-03-09 00:13:59 122
KwakungoMashi 1999, futhi ngathola ithuba elingalindelekile lokuzwa ivangeli lezinsuku zokugcina likaNkulunkulu uSomandla. Ngafunda ukuthi uNkulunkulu osesimweni somuntu ufikile emhlabeni futhi Yena ngokwakhe wayekhuluma futhi ehola isintu ukuze asisindise ekubusweni uSathane, ukuze asenze silahle izimpilo zethu zokuba sebuhlungwini, ukuba ngabawile, ukuze siphile emhlabeni nasezulwini elisha. Futhi ngokuhlanganyela ngokubekezela nangokucophelela kwabafowethu nodadewethu, ngezwa amaqiniso amaningi engangingazange ngiwezwe ngaphambili, anjengalokhu: Uhlelo lukaNkulunkulu kokuphatha lweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, imfihlakalo yokuba yinyama kukaNkulunkulu, ukuthi abantu abakhohlakele badinga insindiso kaNkulunkulu osesimweni somuntu, luhlobo luni lomqondo wokudalwa okufanele sibe nalo, indlela yokuphila ubuntu benu obufanele, kuyini ngempela ukuphila komuntu…. Ngathintwa ngokujulile yilawa maqiniso futhi angenza ngakholwa ngokuqinile ukuthii lona umsebenzi kaNkulunkulu weqiniso. Ngalolo suku abafowethu nodadewethu futhi bacula iculo lokuhlangenwe nakho ekuphileni, “Ngicabanga Inkathi Edlule Emuncu kanye Nobumnandi Bamanje, Ngimthanda Ngokwengeziwe UNkulunkulu”: “Oh Nkulunkulu ongokoqobo! Ngiyakuncenga ukuba uzwe indaba yami. Ngiyakhala uma ngicabanga ngokwedlule; inhliziyo yami yayimnyama ingenakho ukukhanya; impilo yami yayingenathemba; ngangingakwazi ukukhuluma ngokuhlupheka empilweni yami, ngangidlulisa izinsuku nje ngokungakwazi ukuzisiza. Ngilalele, ngicabanga inkathi edlule, inhliziyo yami isebuhlungwini. NguSathane udeveli owayengilimaza, engenza ngonakale futhi ngiwe. Amazwi Akho angikhanyisa angihola angikhipha ebumnyameni. Oh Nkulunkulu wangempela! Oh Nkulunkulu wangempela! Ngikuthanda ngaphakathi enhliziyweni yami.” Lokhu kwakhanyisa umphefumulo wami owawunesikhathi eside usebumnyameni njengemisebe yokukhanya, ngazithola sengikhihla isililo. Iminyaka eminingi yokucindezelwa, ukungabi nabulungiswa, nokudabuka yabonakala yedlula masinyane. Inhliziyo yami yazizwa ilula kakhulu. Ngaphandle kwalokho kujabula, futhi ngabonga kakhulu kuNkulunkulu ngokungikhetha phakathi kwezigidi zabantu, ukuvumela umphefumulo wami okhathele, odabukile ukuba uthole indawo yokuphumula ethokomele. Kusukela lapho impilo yami yaguquka kakhulu. Ngangingaselusizi futhi ngingasaphelelwe amandla, kodwa ngagxilisa ingqondo yami yonke ekufundeni izwi likaNkulunkulu, ukuya emihlanganweni, nokuhlanganyela ngeqiniso. Izinsuku zonke zazigcwele futhi zinenjabulo. Kamuva ngaqala ukwenza umsebenzi wokushumayela ivangeli. Ngenxa yokuthi nganginomfutho kakhulu kanye nokuqiniseka nangeqiniso lokuthi ngangingowezinga elithile, ngemva kwesikhathi esithile umsebenzi wami wawusuthela ngempela izithelo. Ngathola ukunconywa umholi weqembu lami lobuvangeli, futhi abafowethu nodadewethu ebandleni nabo babebheka mina. Njalo babenokuza kimi bezobuza izinto ababengaziqondi mayelana nokushumayela ivangeli. Nginganakile ngaqala ukuba nokweneliseka ngami okuncane, futhi ngacabanga: Ngizuze masinyane ebandleni igama kanye nesikhundla engikulangazelele ezweni iminyaka eminingi. Uhlangothi lwami lokuba “yiqhawe” ekugcineni luthole indawo yalo! Ngibona engangikufeza ngazizwa ngeneliseke kakhulu futhi ngasebenza ngisho nangokwengeziwe ukuze ngifeze umsebenzi wami. Noma bungakanani ubunzima engangibhekana nabo, ngangenza konke okusemandleni ukuze ngibunqobe. Noma yini ibandla elalihlela ukuba ngiyenze, ngangizimisela ukulalela futhi ngenze konke engingakwenza ukuze ngikuqede. Ngezinye izikhathi umholi webandla wayengilungisa futhi athene izici zami ezithile ngenxa yokuthi ngingawenzanga kahle umsebenzi wami. Kungakhathaleki ukuthi ngangiphatheke kabi kangakanani, ngaphandle ngangingeke ngibeke izaba. Nakuba ngahlupheka kakhulu phakathi ngalesi sikhathi, kuphela nje uma nganginesikhundla phakathi kwabafowethu nodadewethu futhi bebheka mina, ngangizwa kufanelekile kakhulu ukuba ngikhokhe leli nani. Kodwa uNkulunkulu angabona zonke izingxenye zabantu. Ukuze alungise imibono yami eyiphutha ngokuphila nangokubaluleka komuntu, ukuze ahlanze ukungcola ekukholweni kwami kuNkulunkulu nasekwenzeni umsebenzi wami, uNkulunkulu wahlela izimo kaninginingi ukuze angahlulele futhi angisindise.
Kwakungo-2003, lapho ngakhushulelwa khona ekubeni ngibe umholi weqembu lethu lobuvangeli. Kanye nalokhu kuphakanyiswa esikhundleni sami umklamo womsebenzi wami nawo wanda, futhi ngazizwa ngijabule ngokwengeziwe: Igolide licwebezela yonke indawo. Ngizimisele ukwenza kahle umsebenzi wami futhi ngikhuphuke njalo ukuze abafowethu nodadewethu bezoba nomona futhi bangihloniphe ngokwengeziwe. Lokho kuyoba kuhle kakhulu! Ngesikhathi ngifika lapho ngizokwenza khona umsebenzi wami, umholi wakucabanga ukuthi ngisanda kuthatha lolu hlobo lomsebenzi futhi angikabi nakho okuhlangenwe nakho kanye nekhono, ngakho wahlanganisa ndawonye abanye abaholi bamaqembu obuvangeli basezindaweni eziseduze ukuze sizofunda komunye nomunye. Kodwa phakathi nomhlangano, ngabona ukuthi bonke babebadala kunami nokuthi babengabezinga eliphansi. Ngesikhathi behlanganyela ngezwi likaNkulunkulu futhi babengakhulumi ngokucacile njengoba ngangenza. Ngazithola sengizazisa futhi ngingacabangi lutho nhlobo ngabo. Ngaba nomuzwa wokuthi nakanjani ngizokwazi ukwenza umsebenzi omuhle ngokwethembela emandleni ami siqu. Ngemva komhlangano masinyane ngaya kuwo onke amaqembu ukuze ngithole ukuqonda ngomsebenzi wawo. Lapho ngithola amaphutha athile nokusilela emsebenzini wabo nokuthi abanye abafowethu nodadewethu babengakwazi ukushumayela ivangeli kanye nokunikeza ubufakazi ngoNkulunkulu, ngakhathazeka futhi ngacasuka. Ngazithola sengibathethisa abafowethu nodadewethu: “Ingabe ukufeza umsebenzi wenu ngale ndlela ngempela kungavumelana nentando kaNkulunkulu? Anifuni ukukhokha inani kodwa nifuna ukusindiswa uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lomuntu lunayo ingqondo? …” Futhi ngezinye izikhathi phakathi nokuhlanganyela ngangibukisa, ngitshele wonke umuntu indlela engangihlanganyele ngayo emsebenzini wevangeli, konke mayelana nemiphumela engangibe nayo. Ngesikhathi ngibona umona ebusweni babafowethu nodadewethu, ngangizigqaja kakhulu futhi ngibe nomuzwa wokuthi ngangethembeke kakhulu kunabanye. Ngokuhamba kwesikhathi, abafowethu nodadewethu babehlala bexoxa nganoma iyiphi inkinga nami futhi babengasagxili ekuthandazeni kuNkulunkulu noma ekwethembeleni Kuye. Futhi angizange nje kuphela ngizizwe ngesaba, kodwa ngakujabulela lokho. Ekugcineni, ngalahlekelwa ngokuphelele ukusebenza koMoya oNgcwele futhi angabe ngisakwazi ngempela ukusebenza. Ekuqaleni kuka-2004 ibandla langisusa emisebenzini yami futhi langibuyisela ekhaya ukuba ngiyozakha ngokomoya. Ngibhekene nalo mphumela, kwaba sengathi ngiwele masinyane emgodini ongenamkhawulo. Umzimba wami wonke wawubunile futhi ubuthakathaka emuzweni onamandla wokukhungatheka, futhi ngazithola ngicabanga: Kwakukuhle kakhulu lapho ngiqala ukwenza umsebenzi wami. Futhi manje, ukubuyela emuva ngokuhlazeka okunje, ngizowubheka kanjani umndeni wami kanye nabafowethu nodadewethu edolobheni lakithi? Bazocabangani ngami? Ingabe bazohlekisa ngami, bangibukele phansi? Ngokushesha lapho ngicabanga ngokulahlekelwa ukubukeka nesikhundla sami ezingqondweni zabanye abantu ngazizwa sengathi ngizohlakazeka. Ngangiphila esimweni esibi nengangingakwazi ukuzikhipha kuso futhi ngingakwazi ngisho nokuqhubeka ngifunde amazwi kaNkulunkulu. Phakathi nalobu buhlungu, angikwazanga ukungathandazi kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Sengibuthakathaka kakhulu futhi umoya wami usebumnyameni ngenxa yokuthi angikwazi ukwamukela iqiniso lokuthi ngehlisiwe. Futhi angizimisele ukulalela amalungiselelo ebandla kodwa ngiyazi ukuthi yonke into oyenzayo yinhle futhi iqukethe intando Yakho enomusa. Ngizimisele ukukhanyiselwa Nguwe futhi ngiqonde intando Yakho.” Ngemva kokuthandaza, lawa mazwi kaNkulunkulu angilethela ukukhanyiseleka: “Ekufuneni kwakho, unokucabanga okuningi kakhulu komuntu ngayedwana, amathemba, kanye nekusasa. Umsebenzi wamanje uqondene nokubhekana nokulangazelela kwakho isikhundla kanye nalokho okukhulu okulangazelelayo. Amathemba, ukulangazelela[a] isimo, kanye nokucabanga konke kumele isimo sakudala sobusathane. … Yize sewufike kulesi sigaba namuhla, awukasidedeli isimo sakho, kodwa uhlala wehluleka ‘ukubuza mayelana’ nakho futhi usibheke nsukuzonke, ngokwesaba okukhulu ukuthi ngelinye ilanga isimo sakho siyolahleka futhi igama lakho lonakale. … Manje seningabalandeli, futhi niyasiqonda kancane isigaba somsebenzi. Nokho, anikakubeki eceleni ukulangazelela kwenu izikhundla. Uma isikhundla sakho siphezulu ufuna kahle, kodwa uma isimo sakho siphansi uyayeka ukufuna. Izibusiso zesikhundla zihlala zisemqondweni wakho. Kungani iningi labantu lehluleka ukuphuma emicabangweni emibi? Akubangelwa amathemba ‘afiphele’? (“Kungani Ungazimisele ukuba Isiqhathaniso?” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ukwahlulela okwambulwe emazwini kaNkulunkulu kwangivusa kabuhlungu, futhi kwangenza ngaqonda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wangaleso sikhathi wawungowokubhekana nokulangazelela kwami isikhundla, ukungenza nginyathele endleleni efanele ekuphileni. Ngicabanga emuva kusukela ngesikhathi ngiqala ukwenza umsebenzi wami, nganginombono omuhle kakhulu ngalezo zikhathi enganginesikhundla ngazo. Ngangizethemba kakhulu futhi ngingakwesabi ukuhlupheka noma ubunzima. Ngesikhathi ngibhekene nothile engilungisa noma kunezici zami ezithenwayo angizange ngenqabe. Kodwa kamuva, emva kokuba sengidedelwe futhi sekufanele ngibuyele ekhaya ngangingasakwazi ukuphuma ekubeni kwami nombono ongemuhle. Ngabona ukuthi ngaphandle kwakubonakala sengathi ngangifeza umsebenzi wami, kodwa empeleni ngangiphethe ifulegi lokufeza umsebenzi wami ngesikhathi ngiphethe izinto mathupha. Empeleni kwakuwukusebenzisa uNkulunkulu ukwanelisa izifiso zami ezazifihlekile iminyaka eminingi—ukuthola isikhundla kanye nokubonakala ngiphakeme. Futhi kwakungekhona ukufuna iqiniso futhi ingasaphathwa eyokufeza umsebenzi wesidalwa wokwanelisa uNkulunkulu. Ngesikhathi ngenza umsebenzi wami futhi ngabona ukusilela kwabafowethu nodadewethu, angizange ngibasize ngothando kuphela, kodwa ngathembela esikhundleni sami ukuze ngibathethise. Ngenhloso ngaziphakamisa mina, ngaba ufakazi wami ngokwami, futhi ngangikhathazeke ngokuthi wonke umuntu abheke mina futhi ahloniphe mina. Kusukela ekuqaleni kuye ekugcineni, nganginomgomo owodwa engqondweni nasezenzweni zami—ingabe lokhu kwakungekhona yini ukuphikisa uNkulunkulu okusobala? Umuntu wadalwa nguNkulunkulu, ngakho kufanele sikhonze futhi sibheke Kuye. Izinhliziyo zethu kufanele ziqukathe kuphela isikhundla sikaNkulunkulu, kodwa ngangiwumuntu ongcolile futhi okhohlakele, ophansi owayefuna ukuthandwa ngabanye. Ingabe lokhu akusikhona yini ukuzithwala okubi? Ingabe lokhu akuyona into eyesabekayo nephikisana noNkulunkulu? Ingabe lokhu kuziphatha akulona yini icala elikhulu esimweni sikaNkulunkulu? Lapho ngicabanga ngalokho, ngazithola ngiqhaqhazela ngokwesaba isimo sami sokuzithwala. Kwabonakala ukuthi ngangisesimweni esiyingozi ngempela sokuba ngithole isijeziso sikaNkulunkulu! Isimo sikaNkulunkulu siwukulunga nobungcwele futhi asiwabekezeleli amacala esintu. Angakubekezelela kanjani ukuvumela mina, lo mntwana ovukelayo, ukuba ngokungenakuzithiba ngiphazamise futhi ngone umsebenzi Wakhe? Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngabona khona ukuthi ukubuyiselwa kwami emuva kwakuwukungibekezela okukhulu nothando olukhulu lukaNkulunkulu. Ngaphandle kwalokho, ngabe ngenza ububi obukhulu kakhulu kwaze kwaba sezingeni lokuba angabe esakwazi ukungixolela. Khona-ke kwakuyobe sekonakele kakhulu. Lapho ngicabanga ngakho ngokwengeziwe ngaba nokwesaba okwengeziwe, futhi ngezwa ngokwengeziwe ukuthi ngimkweleta kakhulu uNkulunkulu. Ngazithola sengiguqe phambi Kwakhe futhi ngithandaza: “O Nkulunkulu! Imvelo yami inokuzithwala kakhulu, ayinasisindo ngempela. Angilifunanga iqiniso ngesikhathi ngenza umsebenzi wami, futhi angizange ngicabange ngokukhokhela uthando Lwakho. Ngangimatasa ngehla ngenyuka ngenxa yegama kanye nesikhundla, futhi ngabeka inhliziyo yami ekubeni phambili ebandleni, ngakho kwakungenzeka kanjani ukuthi ngingakhubeki futhi ngiwe ngesikhathi ngifeza umsebenzi wami nginalolo hlobo lwenhloso? Ukuba ukujezisa nokusola Kwakho, nokubheka kanye nokuthena Kwakho akuzange kungifikele ngesikhathi, ngokuqinisekile ngabe ngaqhubeka nendlela yesitha sikaKristu. Ekugcineni ngangizokona ithuba lami lokusindiswa. O Nkulunkulu! Ngiyawubonga umusa Wakho nensindiso Yakho kimi. Kusukela ngalolu suku, ngizimisele ukuyeka izifiso zami zesikhundla futhi ngifune iqiniso, futhi ngamukele ngokwengeziwe ukwahlulela nokusola Kwakho, ukuze ngiguquke masinyane esimweni sami esonakele.” Ukukhanyiselwa nokuqondiswa uNkulunkulu kwangikhipha esimweni esiphambene futhi kwangenza ngazibona ukuthi nginesimo sokuzithwala kanye nengqikithi yokumelana noNkulunkulu. Futhi ngazuza ukuqonda isimo sokulunga sikaNkulunkulu, ngase ngizwa ukukhululeka okukhulu enhliziyweni yami. Futhi ngangizimisele ukuqhubeka nokufuna iqiniso kunoma yisiphi isimo uNkulunkulu asibeka kimi, futhi ngiqonde ngokujule ngokwengeziwe intando Yakhe.
Ekufuneni kwami ngemva kwalokho, ngabona amazwi kaNkulunkulu athi: “Nginquma isiphetho somuntu ngamunye hhayi ngokweminyaka, ubukhulu, izinga lokuhlupheka, lingasaphathwa izinga abamema ngalo ukudatshukelwa kodwa ngokuthi banalo yini iqiniso. Akukho okunye ukukhetha ngaphandle kwalokhu. Kumele nikubone ukuthi labo abangalandeli intando kaNkulunkulu bayojeziswa. Leli iqiniso elingenakuguqulwa” (“Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). “Njengesidalwa sikaNkulunkulu, umuntu kufanele afune ukwenza umsebenzi wesidalwa sikaNkulunkulu, afune ukuthanda uNkulunkulu ngaphandle kokwenza ezinye izinqumo, ngoba lumfanele uNkulunkulu uthando lomuntu. Labo abafuna ukuthanda uNkulunkulu akufanele bazifunele izinzuzo noma lokho abakulangazelela bona; lena indlela elungile yokufuna” (“Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu ayesetshele abantu ngokucace ngokuphelele nangokuqondakalayo ukuthi iyini intando kanye nezimfuno Zakhe ukuze isintu siqonde indlela efanele yokufuna nokuthi iyini indlela engalungile. Ngaleso sikhathi ngabeka igama kanye nesikhundla ngaphezu kwakho konke, kodwa empeleni, uNkulunkulu wayengabheki ukuthi umuntu uphakeme kangakanani ngesikhundla, ukuthi mdala kangakanani, noma ukuthi uhlupheke kangakanani ngenxa yokukholwa kwakhe kuNkulunkulu. Wayebheka ukuthi uyalifuna yini iqiniso noma cha kanye nokuthi unakho yini ukumqonda kwangempela uNkulunkulu. Labo abaneqiniso kodwa abangenaso isikhundla esiphakeme nabo bangazuza ukunconywa Nguye, kodwa labo abangenalo iqiniso futhi abanesikhundla esiphakeme yilabo uNkulunkulu abazondayo nobalahlayo. Lesi yisimo sikaNkulunkulu sokulunga nobungcwele. Isikhundla ngeke sinqume isimiselo somuntu, futhi asilona uphawu lokusindiswa komuntu ekukholweni kwakhe kuNkulunkulu. Akulona uphawu ikakhulukazi lokuthi umuntu upheleliswe uNkulunkulu. Kodwa njalo ngangisebenzisa isikhundla sami ukulinganisa ukufaneleka kwami futhi okwakungijabulisa kakhulu ukuba kwakuwukuthi kubhekwe mina nokuthi ngihlonishwe ngabanye. Ingabe lokhu akuphikisani ngokuphelele nezimfuno zikaNkulunkulu? Ingabe ukukholwa kuNkulunkulu ngale ndlela akulona ize ngokuphelele? Akukhona nje kuphela ukuthi ngangingeke ngikwazi ukusindiswa uNkulunkulu, kodwa ekugcineni ngangizokuzwa ukujeziswa uNkulunkulu ngenxa yezindlela zami ezimbi. Ngaleso sikhathi, lokho uNkulunkulu ayengiphathise khona kwakuwukungivumela ukuba ngingene eqinisweni, ukuba ngikwazi ukufuna uguquko lwesimo, ngifune ukulalela nokuthanda uNkulunkulu, futhi ekugcineni ngisindiswe bese ngipheleliswa Nguye. Yilokhu kuphela okwakuyindlela efanele. Ngemva kokuqonda konke lokhu, inhliziyo yami yagcwala ukubonga uNkulunkulu. Ngenxa yokwahlulelwa nokusolwa Nguye okwangisusa endleleni engalungile futhi kwangikhanyisela ukuze ngiqonde intando Yakhe, okwangenza ekugcineni ukuba ngibone ngokucacile ingozi kanye nemiphumela yokufuna igama nesikhundla. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ngakwazi khona ukuphaphama futhi ngaguquka kusenesikhathi. Ngalokho engahlangana nakho ngathola ukuyazi imibono yami engalungile mayelana nokufuna, ngaqonda amaqiniso athile kanye nezinhloso zikaNkulunkulu ezilungile, kanti nesimo sami sengqondo saphinde sathola ukwelulama. Ngaphinde ngaphilela ukufeza umsebenzi wami.
NgoJulayi 2004 ngaya endaweni ekude ezintabeni futhi ngabambisana nomfowethu owayelapho emsebenzini wevangeli. Ngesikhathi ngiqala lowo msebenzi, ngagcina engqondweni yami izifundo ngamaphutha ami angaphambilini. Ngangivame ukuzikhumbuza ukuba ngingafuni igama noma isikhundla kodwa ngobuqotho ngifeze umsebenzi wami njengesidalwa, ngakho lapho kunezindaba engangingaziqondi noma ezazingangicaceli kahle, ngangizibeka eceleni bese ngenkuthalo ngifuna umfowethu ukuba ngihlanganyele naye, ukuze sizixoxe futhi sizixazulule. Kodwa njengoba umsebenzi wami wathela ngokwengeziwe izithelo, isimo sami sokuzithwala saphinde saveza ikhanda futhi ngaqala ukuphinde ngigxile ekubonakaleni nasesikhundleni sami siqu. Phakathi nomhlangano ngesinye isikhathi, ilungu leqembu lendawo lobuvangeli lathi kimi ngokujabula: “Ngenxa yokuza kwakho lapha sesiphendule abaningi baba amakholwa….” Umlomo wami wathi lokhu kwakuwumphumela wokusebenza koMoya oNgcwele, kodwa enhliziyweni yami ngangijabule kakhulu ngami. Ngemva kokuba umhlangano usuphelile futhi ngaphindela ekhaya lomndeni owawungamukele, ngahlala embhedeni wami futhi ngazindla engqondweni yami ngesehlakalo ngasinye somsebenzi wami ngaleso sikhathi. Ngazithola sengizincoma, ngicabanga: Kubonakala sengathi nginekhono ngempela kulo msebenzi. Uma nje ngiqhubeka ngisebenza kanzima, ngingase ngokuqinisekile ngiphinde ngiphakanyiswe. Ngazibona ngaleso sikhathi kuphela ngiyiqhawe, futhi isimo sikaNkulunkulu sasesihambile kakade enhliziyweni yami. Lapho ngenza umsebenzi wami ngemva kwalokho, ngaqala ukuncintisana ngezikhundla nezisebenzi engangikanye nazo. Ngaqala ngokubukisa ngokusobala phambi kwabafowethu nodadewethu njengokungathi noma yimiphi imiphumela etholakala emsebenzini wethu yonke yayingenxa yemizamo yami. Njengoba ngase ngihlehlela emuva kwalasha ngesinyathelo esisodwa ngesikhathi, uNkulunkulu waphinda futhi wangelulela isandla sensindiso. Ngenye intambama kungalindelekile ngaba nemfiva enzima. Izinga lokushisa kwami lafinyelela emazingeni ayi-102 futhi ngisho nangemva kokuthatha umuthi izinsuku eziningana ngangingabi ngcono. Ngaya esibhedlela ukuze ngithole ukumpontshelwa, kodwa isimo sami asizange nje kuphela singabi ngcono kodwa saba sibi ngokwengeziwe. Kwakungahlali lutho esiswini, ngisho namanzi. Ekugcineni, ngahlala ngilele futhi ngezwa sengathi ngisonqenqemeni lokufa. Ngesikhathi sokuhlushwa yilokho kugula, angizange ngicabange ngokuthi luhlobo luni lwesikhundla engizoba naso ngosuku olulandelayo. Masinyane ngaguqa phansi futhi ngathandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Lokhu kugula okungehlele kungumusa wentando Yakho kanye nesimo Sakho esilungile. Angifuni ukukuqonda kabi noma ngisole Wena; nginxusa Wena kuphela ukuba uphinde ungikhanyisele futhi ungikhanyise, ungivumele ngiqonde intando Yakho ukuze ngiqonde ngokujule ngokwengeziwe ukukhohlakala kwami.” Ngemva kokuthandaza, inhliziyo yami yaba sekuthuleni okukhulu. Ngaso leso sikhathi, lawa mazwi kaNkulunkulu afika masinyane kimi: “Imvelo yenu yokuzidla nokuziqhenya yikho okunenza nikhaphele onembeza benu, nihlubuke futhi nimelane noKristu, nembule ububi benu, futhi ngalokho niziveza obala izinhloso zenu, enikucabangayo, nezifiso ezinobugovu kanye namehlo enu agcwele umhobholo” (“Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Onke lawa mazwi avela kuNkulunkulu ahlaba inhliziyo yami njengenkemba; angihlaba enxebeni. Lonke uhlobo lobubi bokuzithwala engangilubonisile lwafika engqondweni yami ngokucace kakhulu. Inhliziyo yami yezwa ubuhlungu futhi ngaba namahloni nokuphoxeka okungenakulinganiswa. Kungaleso sikhathi lapho ngabona khona ngokucacile ukuthi kwakungenxa yesimo sami sokuzithwala okwakwenze unembeza wami walahlekelwa ukusebenza kwawo kwasekuqaleni ngaze ngangakwazi ukulalela nokukhonza uNkulunkulu njalo ngobuqotho. Lokhu kwakwenze njalo ngafukamela isikhundla nesifiso, futhi ngokushesha lapho ngithola ithuba ngangincintisana ngesikhundla, futhi ngifuna ukubukisa nokucindezela abanye. Ngangingakwazi ukumane ngibe umuntu olalelayo. Kwakusobala ukuthi noma yiziphi izithelo zomsebenzi wami zazincike ekusebenzeni koMoya oNgcwele; kwakuyisibusiso sikaNkulunkulu. Nokho, ngokungenamahloni ngantshontsha inkazimulo kaNkulunkulu, ngasebenzisa ithuba ukuze ngiziphakamise, ngaphinde ngathokozela ukuhlonishwa nokukhonzwa ngabafowethu nodadewethu; ngazithwala kangangoba ngalahlekelwa wumqondo. Kulapho engabona khona ukuthi lesi simo sami sokuzithwala saba yimbangela yangempela yokumelana kwami noNkulunkulu. Ukube angisixazululanga, ngangingeke ngikwazi ukulalela uNkulunkulu noma ngizinikele ekufezeni umsebenzi wami.
Ngaphansi kokuqondisa kukaNkulunkulu, ngaphinde ngacabanga ngamazwi Akhe: “Lapho umuntu eqaphela ukuthi imvelo yakhe iyini, yeka ukuthi kubi kanjani, yeka ukuthi kunyanyisa kanjani nokuthi kudabukisa kanjani, akabe esazazisa kakhulu, akabe esaba ngoziqhenyayo futhi akabe esazijabulela njengoba ayenza phambilini. Uzizwa kanje, ‘kumele ngibe qotho futhi ngizehlise, futhi ngenze okuthile kokushiwo yizwi likaNkulunkulu. Uma kungenjalo, angeke ngihlangabezane nendinganiso yokuba umuntu, futhi ngizoba namahloni okuphila phambi kukaNkulunkulu.’Uzibona engelutho, engabalulekile. Ngalesi sikhathi kulula kuye ukufeza iqiniso, futhi ubukeka njengomuntu ngempela” (“Ukuzazi Ngokuyinhloko Kuwukwazi Imvelo Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Amazwi kaNkulunkulu angikhombisa indlela yokwenza izinto kanye neyokungena, nokuthi uma ngifuna ukuyeka ngempela imicabango yami yegama nesikhundla, kwakufanele ngenze umzamo wokuzazi isimo sami. Lapho ngibona ngempela ukuthi ngangiphansi kangakanani, nokuthi ngangingenamsebenzi kangakanani, ngangingakwazi ukuba umuntu onokuzithoba futhi ongenakho ukuzithwala. Khona-ke, ngangizokwazi ukufuna iqiniso izinyawo zami zombili zizimelele phansi. Eqinisweni, ukuletha kukaNkulunkulu lokhu kwahlulela nokusola, lesi sishayo nokulungisa, kwakungokokuthi ngibe nokuqonda kwangempela ingqikithi yami yangempela kanye nobunjalo nesimo sami semvelo. Kwakungivumela ukuba ngibe nokuzazi ngaphambi kukaNkulunkulu, ukubona ubumpofu bami emoyeni, ukuba kwami ongelutho. Kwakungivumela ukuba ngazi ukuthi engikudingayo yiqiniso, insindiso kaNkulunkulu, okwakungenza ukuba ngiwe phansi phambi kukaNkulunkulu futhi ngibe umuntu oziphethe kahle. Kwakunjalo ukuze ngikwazi ukufeza umsebenzi wami wokwanelisa uNkulunkulu futhi ngiyeke ukufuna isikhundla, okwakulimaza inhliziyo Yakhe. Ngokuqondiswa amazwi Akhe ngaba nendlela eya phambili kanye nokuqiniseka ekufuneni iqiniso. Nakuba ngangikhohlakaliswe ngokujulile uSathane futhi imvelo yami yokuzithwala yayigxile impela, kuphela nje uma ngangizokwazi ukwamukela nokulalela ukwahlulelwa nokusolwa uNkulunkulu kanye nokuvivinywa nokucwengwa Nguye, kusukela lapho ngibone imvelo kanye nesimo sami, khona-ke bese ngifuna ngokungakhathali iqiniso, ngokuqinisekile ngangiyokwazi ukugqashula izibopho nokuhluphekela igama nesikhundla, futhi ngingene endleleni yokusindiswa, yokupheleliswa. Ngemva kokuba ngiphendukele kuNkulunkulu, ngalulama ekuguleni kwami phakathi nezinsuku ezimbili. Lokhu kwaze kwangenza futhi ngabona ngokwengeziwe ukuthi wayesebenzise lokho kugula njengendlela yokungiqondisa. Kwakungesikho ukuthi wayengizwisa ubuhlungu ngamabomu, futhi kwakungeyona indlela yokungijezisa—kwakungokokuphaphamisa inhliziyo yami endikindiki, okokungenza ngiyeke ukufuna okuyiphutha masinyane bese ngingena endleleni efanele yokukholwa kuNkulunkulu. Ngathinteka ngokujulile futhi ngaqiniswa uthando lukaNkulunkulu. Nganika ngobuqotho ukubonga nokudumisa kuNkulunkulu.
Ngemva kokwelulama ekuguleni kwami ngaphinde ngaziphonsa emsebenzini. Ngazinqumela buthule enhliziyiyweni yami ukuthi lapho ngihlangabezane nokuthile okuphathelene negama noma isikhundla, ngokuqinisekile ngiyonikeza ubufakazi kuNkulunkulu. Ngemva kwezinyanga eziningana, ngafunda ukuthi elinye iqembu lobuvangeli lalithola imiphumela emihle kakhulu nokuthi wayehlangane nemisebenzi ethile emangalisayo kaNkulunkulu, futhi wayesonge impumelelo yokuhlangenwe nakho kwabo kanye nendlela yabo yokwenza. Nokho, umsebenzi engangihlanganyela kuwo wawuncipha. Lapho ngibona ukudumala ebusweni babafowethu nodadewethu, ikakhulukazi lapho ngizwa udade ethi “Manje sijabulela insindiso enkulu kaNkulunkulu kodwa asikwazi ukunikeza ubufakazi ngomsebenzi Wakhe. Simkweleta ngempela,” futhi wonke umuntu ezithola esekhala, inhliziyo yami yaba nobuhlungu obukhulu. Angizange ngazi ukuthi ngingaphuma kanjani kuleso simo esibucayi, ngase ngithandaza njalo kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Sonke sibuthakathaka lapho sibhekene nobunzima obungokoqobo, kodwa ngiyazi Nguwe uvivinya ukholo lwethu, uhlola ukuzinikela kwethu. Kodwa isiqu sami sincane kakhulu futhi ngeke ngempela ngikwazi ukuthwala leso sisindo. Ngiyakunxusa ukuba ungikhanyisele ukuze ngiqonde intando Yakho. Ngizimisele ukwenza ngokuvumelana nokuqondisa Kwakho.” Ngemva kokuthandaza, masinyane kwafika umcabango kimi: Kufanele ngicele isisebenzi esikanye naso ukuba size sizohlangana nathi ukuze sithole amandla nokuhlangenwe nakho kwaso. Ngaleyo ndlela abafowethu nodadewethu bazokwazi futhi ukujabulela ukukhanyiselwa nokuholwa uMoya oNgcwele futhi bazi indlela yokwenza umsebenzi wabo wevangeli. Ngangazi ukuthi lo mqondo wawuvela ekuqondiseni koMoya oNgcwele, kodwa ngangisalokhu nginokungabaza okuthile enhliziyweni yami. Ngacabanga: Ngangivame ukuba nekhono elingaphezulu kunelalowo mfowethu ngakho konke futhi ngesikhathi sisemihlanganweni ndawonye njalo ngangimbukela phansi, kodwa manje, ukwenza kwakhe kungcono kunokwami. Lapho engibona ngibukeka ngidangele futhi ngiphoxekile manje, ingabe uzongihleka? Ingabe abafowethu nodadewethu bazongibukela phansi? Kuthiwani ngokuvikela igama lami? … Ngacabanga ngokujulile, futhi ngangingakakwazi ukukhohlwa yigama lami kanye nesikhundla, kodwa masinyane lapho ngicabanga ngentando kaNkulunkulu ephuthumayo yokusindisa isintu nokuthi abafowethu nodadewethu babengenakho ukuqondisa kanye nokuhola kukaMoya oNgcwele, ngasolwa enhliziyweni yami. Njengoba ngangisemanqikanqika, lawa mazwi kaNkulunkulu angikhanyisela: “UMoya oNgcwele akasebenzi nje kuphela kumadoda athile asetshenziswa nguNkulunkulu, kodwa ikakhulukazi ebandleni. Kungenzeka asebenze kunoma ubani. Angasebenza kuwena manje, bese emuva kokuthi usumuzwile, angasebenza komunye emva kwalokho. Landela ngokushesha; lapho ulandela eduze ukukhanya kwamanje, yilapho impilo yakho ingakhula khona. Noma ngabe uluhlobo luni lomuntu, uma nje uMoya oNgcwele usebenza kuye, yenza isiqiniseko sokuthi uyalandela. Yamukela izinto azizwile ngalokho okuzwile ngokwakho, futhi uzothola izinto eziphakeme kakhulu. Ngokwenzenjalo uzothuthuka ngokushesha okukhulu. Lena indlela yokupheleliswa komuntu nendlela impilo ekhula ngayo. Indlela yokupheleliswa itholakala ngokulalela kwakho umsebenzi kaMoya oNgcwele. Awazi ukuthi uNkulunkulu uzosebenza ngomuntu onjani ukukuphelelisa, nokuthi uzosebenza ngamuphi umuntu, isigameko, noma into ukukulethela inzuzo nokukusiza ukuthi uthole ukuqondisisa okuthile” (“Labo Abalalela UNkulunkulu Ngenhliziyo Yeqiniso Bayozuzwa Ngokuqinisekileyo NguNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Ngaphansi kokuholwa amazwi kaNkulunkulu ngaqonda intando Yakhe futhi ngazuza ukuqonda ngendlela yokuhola kanye nokuphelelisa abantu emsebenzini kaMoya oNgcwele. Ngabona: Umsebenzi kaNkulunkulu kanye nokuhlakanipha kukaNkulunkulu kuyamangalisa futhi kuyimfihlakalo. Angazi ukuthi angangikhanyisela futhi angiqondise ngohlobo olunjani lomuntu noma into ukuze ngiqonde intando Yakhe, futhi angazi ukuthi yiluphi uhlobo lwesimo azongilungisa ngalo esimweni sami sokukhohlakala. Kufanele ngifunde ukulalela umsebenzi kaMoya oNgcwele, futhi kungakhathaleki ukuthi isikhundla somuntu siphakeme noma siphansi kangakanani, mdala kangakanani, noma ukuthi side kangakanani isikhathi akholwe ngaso kuNkulunkulu, kuphela nje uma ukuhlanganyela kwakhe kuhambisana neqiniso, kuyintando yamanje kaNkulunkulu, futhi kungabonisa indlela engokoqobo, lokho kuvela emsebenzini nasekukhanyiselweni uMoya oNgcwele. Kufanele ngamukele, ngilalele, futhi ngenze—lokhu ukucabanga komuntu okufanele ngibe nakho. Uma ngingalaleli umsebenzi kaMoya oNgcwele, khona-ke ngizimisele ukuvumela umsebenzi wami ukuba ube nokwehla ukuze ngigcine ukuzithanda kwami. Ngizimisele ukuvumela abafowethu nodadewethu ukuba baphile ebumnyameni ukuze ngigcine ukubonakala kanye nesikhundla sami. Esimweni esinjalo, ngiyisisebenzi esibi ngempela kanye nomphikikristu! Ngesikhathi ngiqaphela lokho, ngazizwa ngesaba futhi angizange ngilokothe ngisho nakanye ngibe yisijaka futhi ngenze ngokumelene nokukhanyisela kanye nokuqondisa kukaMoya oNgcwele. Ngangizimisele ukulahla imvelo yami yobusathane bese ngiduduza inhliziyo kaNkulunkulu ngezenzo ezingokoqobo. Ngakho, ngokushesha ngabiza isisebenzi esikanye naso futhi ngasicela ukuba size sizoxoxa nathi. Okwangenza ngazizwa nginamahloni ukuthi ngemva kokuhlangana ubuso ngobuso, lowo mfowethu akazange angibukele phansi esekudeni noma angihleke. Wabelana nathi ngobuqotho obukhulu indlela ababesebenze ngayo ndawonye ngesikhathi uMoya oNgcwele usebenza phakathi kwabo, kanye nendlela ababethembele ngayo kuNkulunkulu futhi bathandaza kuNkulunkulu lapho behlangabezana nezingqinamba kanye nokwehluleka, izenzo ababezibonile kuNkulunkulu ngemva kwalokho, izinhlobo zokuqonda iqiniso ababezizuzile ngoNkulunkulu, nokunye. Ukubona ukubonakala komfowethu okukhululekile nokunokujabula, kanye nokubona ukuthi abafowethu nodadewethu babebonakala belalele ngokucophelela nangokujabula, nokubona ukumomotheka kuya ngokubonakala ebusweni babo, ngezwa ubuhlungu obukhulu kwaba sengathi ngangephuke inhliziyo. Nokho, ngalesi sikhathi kwakungesikho okokwenelisa igama noma isikhundla sami, kodwa kwakungenxa yokukhuzwa enhliziyweni ngenxa yokukweleta uNkulunkulu. Ngenxa yalokhu, ngezwa ngempela umthwalo kanye nomsebenzi wokuba umholi omuhle. Uma indlela engiyithathayo njengomuntu ingalungile, izolimaza futhi yonakalise izimpilo zabantu abaningi. Izoletha ukuhlupheka ngokomoya kubantu abaningi. Esimweni esinjalo, ingabe yimi obe yimbangela ephambili yokumelana noNkulunkulu? Lapho umsebenzi kaNkulunkulu usuphelile, ngizophendula kanjani Kuye? Kwakungaleso sikhathi lapho ekugcineni ngazenyanya ngempela ngaphakathi enhliziyweni yami. Ngakuzonda ukuthi esikhathini esedlule lapho ngenza umsebenzi wami angizange ngenze ngokwethembeka emsebenzini wami kodwa ngacabanga kuphela ngokufuna igama kanye nesikhundla futhi ngajabulela izibusiso zesikhundla. Akuzange nje kuphela kuphazamise ukungena ekuphileni kwabafowethu nodadewethu, kodwa kwaphazamisa ngisho nakakhulu ukwenziwa kwentando kaNkulunkulu. Futhi ngangilahlekelwe kaningi ukusebenza koMoya oNgcwele futhi ngawela ebumnyameni. Ngabona ukuthi ukufuna igama nesikhundla kwalimaza kakhulu kunokuba kusize. Kodwa ngesikhathi ngizizwa nginecala futhi ngizisola, ngaphinde ngezwa ukukhululeka okuncane. Lokhu kwakungenxa yokuthi, ngaphansi kobuholi bukaNkulunkulu, ekugcineni ngangilahle inzuzo yomuntu siqu ukuze ngenze iqiniso ngalesi sikhathi. Ngangenze okuthile okwakuhlomulisa emsebenzini, kubafowethu nakodadewethu, kanye nakimi uqobo. Ngangimhlazisile uSathane ngezenzo ezingokoqobo futhi nganikeza ubufakazi kuNkulunkulu ngalesi sikhathi.
Ekuhlanganeni kwami nomsebenzi kaNkulunkulu nangenxa yokufuna kwami igama kanye nesikhundla, ngangibhekane nezingqinamba kanye nokwehluleka okuningi. Ngangiphambuke kaningi, futhi ngenxa yalokhu ngangibhekane nokulungiswa kanye nokucwengwa. Ngaya ngokuya, ngabona isikhundla singabalulekile kakhulu, futhi engangikade ngikukholwa ngaphambili—ukuthi ngaphandle kwesikhundla alikho ikusasa kanye nokuthi akekho oyobheka kuwe—lo mbono oyiphutha waguquka. Manje sengilandele uNkulunkulu iminyaka eyi-15. Ngaso sonke isikhathi lapho ngicabanga ngomsebenzi kaNkulunkulu kimi, kuba njalo nomuzwa omnandi ongifikelayo. Angeke ngikhohlwe uthando nensindiso kaNkulunkulu kimi. Ukube kwakungesikhona ukuthi uNkulunkulu wayehlela isimo sami futhi ebhekana nezifiso zami zokuduma, ukuzuza nesikhundla ngasekuqaleni kwempilo yami, ngangiyokwazi kanjani ukuqhubeka ngiphila ngokholo engase ngiphile ngalo iminyaka eminingi kangaka futhi olwase lube ukuphila kwami? Ukube kwakungesikhona ukufika ngesikhathi kwensindiso kaNkulunkulu, ngabe ngisaphila ngokuvumelana nobuthi bukaSathane, futhi ngichitha ukuphila kwami ngenxa yephupho elingeke lifezeke. Futhi ukube kwakungezona izambulo nokucwengwa okuphindaphindiwe uNkulunkulu, ngabe ngisalokhu ngiqhubekela phambili endleleni engalungile futhi bengingeke ngiqaphele ukuthi kubaluleke kangakanani ukuzazi kwami nokuthi sinamandla kangakanani isifiso sami sokuba nesikhundla. Ikakhulukazi ngangingeke ngibone ukuthi ngiyisitha sikaNkulunkulu. Kwakungumsebenzi kaNkulunkulu omangalisayo owenza ukuthi ngibone ingqikithi nengozi eningi yokufuna udumo, inzuzo nesikhundla. Kwavumela ubumqoka obuyiphutha kanye nokubuka kwami ukuphila ukuba kuguquke kakhulu, futhi kwangivumela ukuba ngiqonde ukuthi ukufuna iqiniso nokufeza umsebenzi wokuba yisidalwa kuphela okuwukuphila kwangempela komuntu, kanye nokuthi kungokulahla kuphela ithonya likaSathane lobumnyama nangokuphila okusekelwe emazwini kaNkulunkulu okungenza ukuthi ngiphile ukuphila okunenjongo nokubaluleka. Kuyisithelo sokwahlulela nokusola kukaNkulunkulu ngokuphelele okwenze ngaba nokuqonda kanye noguquko engibe nalo namuhla. Nakuba ukubhekana nokwahlulelwa kanye nokusolwa kwakudinga ukuba ngizwe ubuhlungu bokucwengwa, ngizuze ukuqonda umsebenzi othile ongokoqobo kaNkulunkulu, ingqikithi Yakhe yomusa, kanye nesimo Sakhe sokulunga nobungcwele. Manje sengiyakwazi ukubona ngokucacile, ukuzonda, nokulahla ubuthi bukaSathane obangilimaza iminyaka eminingi, futhi ngiyakwazi ukuba nempilo yangempela yobuntu futhi. Akukho okwalokhu kuhlupheka okwaba yize. Kwaba ngokunenjongo enkulu, into ebaluleke kakhulu. Endleleni kusukela namuhla kuya phambili, ngizimisele ukwamukela ngokwengeziwe ukwahlulelwa nokusolwa, kanye nokuvivinywa nokucwengwa okuvela kuNkulunkulu ukuze lonke uhlobo lwesimo sokukhohlakala kwami lube nokuhlanzwa masinyane, futhi ngibe umuntu ovumelana nentando kaNkulunkulu.
a. Umbhalo wokuqala awunawo amazwi athi “isifiso sokuba.”
Okwedlule： Ukwahlulela Kungukukhanya
Okulandelayo： Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu